Halima ''Aabahey waxa uu matagayay dhiig markaasi ayay nagu dhaheen guriga ha jooga''
HomeWararka Maanta SomaliskaHalima ”Aabahey waxa uu matagayay dhiig markaasi ayay nagu dhaheen guriga ha jooga”
Halima ”Aabahey waxa uu matagayay dhiig markaasi ayay nagu dhaheen guriga ha jooga”
June 21, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Warbaahinta SVT ee dowlada ayaa soo bandhigtay ceeb iyo fadeexad qabsatay hay’ada Caafimaadka Sweden qeybta Gotenborg kadib markii ay Aabo Abdirahmaan Sheikh Muhiadiin oo ahaa shiikh aad looga yaqaano Gotenborg kuna dhacay xanuunka Corona u diideen in ay dhigaan isbitaalka isagoo kadib u dhintay neefta oo ku dhagtay.
Halima oo ah gabar uu dhalay shiikha ayaa Talafashinka Dowlada uga sheekeesay dhibkii ku dhacay aabaheed iyo waxa ay kala kulantay Qeybta Caafimaadka oo fashil iyo ceeb ku noqotay madama qof xanuunsanaya loo diiday in la dhigo isbitaalka si loo siiyo hawo.
”Waxaan rabaa in aabahey uu noqdo qofkii u danbeeyay ee dhibkaan ku dhaco isla markana loo qaato xaalad dhab ah dadka u baahan caawin” Halima ayaa sidaasi u sheegtay SVT.
” waxaan la xiriirnay qeybta Caafimaadka ee Centerka waxaan u sheegnay in Abdirahmaan uu xanuun sanayo uuna dhiig tufayo isla markana neefta dhibeyso waxay nagu dhaheen wuu caafimaadaa waxaad siisaan Alvedon” Hibo oo ah xaaska shiikha ayaa sidaasi u sheegtay SVT.
Abdirahmaan Sheikh Muhiadiin ayaa mudo bil ah oo uu ku jiray xaaladaasi kadib u dhintay isagoo dhawaan lagu aasay magaalada Gotenborg sheekada shiikha ayaana noqotay warbixin ay warbaahinta gudaha aad uga hadlaan.
Halkan Riix Daawo Halima oo ka hadleysa dhimashada aabaheed
sida ay ku warameyso wariyaha tabineysa barnaamijka waxay la xiriireen madaxa qeybta caafimaadka ee halima la xiriirtay ee Gotenborg kaasi oo ka gaabsaday in uu ka hadlo dhacdadan.
Dad badan oo ajanabi ah Somalina ku jirto ayaa u dhintay sidaasi oo kale sida Somaliska.com ku soo tabisay warbixino hore waxana badankooda loo sheegay in guriga joogaan mudo 14 cisho ah iyagoo xaalad halis ah ku jira.